यो तस्वीर मलेसियाको जेलमा नेपाली युवाहरुलाई एउटै कोठामा खाँदेर राखिएको परिदृश्य हो । यति हृदयविदारक फोटोहरु सामाजिक सञ्जाल भरिएका छन् । असरल्लमा परेका र उद्धारको पर्खाईमा रहेका अनेकन युवाहरु दूतावास, जेल, यस्तै कोठाहरुमा कोच्चिएर हारगुहार लगाइरहेका छन् । यिनको अभिभावकत्व श्रम सहचारी र राजदूतले लिनुपर्ने हो, उनीहरुले नेपाली युवाहरुको यस्तो हृदयविदारक दृश्य हेर्छन्, केही गर्दैनन्, श्रम सहचारी र राजदूतले चाहे भने धेरै गर्न सक्छन्, किन नगरेको होला ?
विदेशमा समस्या पर्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले गुहार गर्ने भनेको नेपालको प्रतिनिधिलाई नै हो । गुहार गर्दा सुन्दैनन्, दूतावास गयो भेट्नै दिदैनन्, कतिपय देशका दूतावासबाट काम निकाल्न दलालको भर पर्नुपर्ने बाध्यता पनि सुनिएको छ ।
कतिपय युवाहरु रोजगारदाताले तलव नदिदा, कतिपयलाई एउटा काम भनेर अर्को लगाउँदा पनि अप्ठेरोमा परेर फर्कन चाहन्छन् । तर सरकार सुन्दैन ?
साउदीको जेलमा पर्वत खुइजुरीका सन्तबहादुर ज्यान मुद्दामा १७ वर्षदेखि जेलमा छन् । उनी भेडा चराउने काममा गएका थिए । एकदिन भेडा चोर आयो र दोहोरो भिडन्त भयो । चोर उदाआयद होम भन्ने व्यक्ति मारियो । सन्तवहादुरलाई ज्यानमारा भनेर जेलमा कोचियो । मृतकको ठूलो छोरोले कुरा बुझ्यो र माफी दियो तर सानो छोरा बालिक हुन्जेलका लागि सन्तबहादुर जेलमा कोच्चिएको छ । उसले माफी दिएन भने सन्तबहादुरलाई फाँसी हुनेछ । सरकारले, दूतावासले चाहेको भए, पहल गरिदिएको भए उहिल्यै सन्तबहादुर जेलबाट छुटिसक्थे । अहिले उनी परिवारलाई भेट्न पाए हुन्थ्यो, नेपाल फर्कन पाए हुन्थ्यो भनेर गुहार लगाइरहेको छ, सरकारले सुनिरहेको छैन ?
सन्तबहादुर त प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् । यस्ता अनगिन्ति युवाहरु खाडीदेखि इजरायलसम्मका जेलमा कोच्चिएर रहेका छन् । धेरैको श्रम र यौन शोषण भइरहेको छ, कतिपय बेहाल परेका छन् । उद्धारका लागि हजारौं कुरिरहेका छन् । सयौंमाथि अत्याचार भइरहेको छ र मरेका पनि छन् तथा तिनका शव आइरहेका छन् । शव ल्याउन पनि समस्या छ, जिउँदै उद्धार गर्न सरकार उदासीन भइरहेको छ ।
यसरी कोचेर त भेडाबाख्रालाई पनि राखिन्न । नेपालका सार्वभौम युवाहरु खाडी मुलुकहरुमा दासको भन्दा गएगुज्रेको जीवन बिताइरहेका छन् । सरकार हेर....।
लोकतन्त्र नेपाल भनेर के गौरव गर्नु र हजुर ?